Daryeelka Kitefish | Kalluunka
Kalluunka biyaha macaan
Rosa Sanches | | Aquarium biyo qabow, Kalluunka
El kalluunka kite wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa qaaradda Ameerika iyo ka mid noqo qoyska ee kalluunka dahabka ah ama sidoo kale loo yaqaan Goldfish. Comet -ka ama kalluunka sarasa wuxuu leeyahay jir dheer wuxuuna leeyahay hal dabool. Aad u badan la mid ah noocyada Caadiga ah iyada oo lagu kala duwan yahay in jidhku aad u dheereeyo, xarragoonayo oo uu leeyahay baalal horumarsan.
Waxaa laga helaa midabyo cad, lacag ah, jaale iyo casaan ah, waana mid ka mid ah noocyada ugu caansan maadaama uu ka mid yahay kalluunka ugu fiican la qabsashada duruufaha oo dhan. Haddii daryeelku wanaagsan yahay, qaniinyadaani badiyaa waxay socotaa inta u dhaxaysa toddoba ilaa afar iyo toban sannadood waxayna badiyaa gaaraan ilaa 20 sentimitir, oo aan la xisaabin dabada.
uu kalluunka biyaha qabow, iyo badbaadinteeda saxda ah waa inay ahaataa dhexdhexaad ama waxoogaa alkaline ah, ilaa 16 ° heerkul. Kitefish waa mid ka mid ah noocyada ugu wasakhaysan waxayna wasakheeyaan biyaha ku jira quraaradda, sidaas darteed waa lama huraan inay mar walba nadiif tahay.
Haddii aad go'aansato kalluunka noocan ah si aad u qabsato quraaradda, waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaato inay yihiin kalluun ma jecla kelinimada haba yaraatee, kaas oo ay tahay inaad ku darto kalluun dheeri ah oo iyaga ka mid ah, badiyaa nooc kale oo kalluun dahab ah. Dabcan, waa inaadan waligaa ku dhex darin kalluunka kulaylaha, maxaa yeelay baahida biyaha ee kuwa dambe isku mid ma aha iyo sidoo kale kalluunka dabaasha ka gaabiya iyaga.
Kalluunka qaniinyada wuxuu u baahan yahay meel bannaan oo si sahlan loogu dhaqaaqo inta ku jirta quraaradda oo dhan, taas oo ay tahay in la dheereeyo. Waxay sidoo kale aad u firfircoon yihiin, taas oo ka dhigaysa inay mararka qaarkood u muuqdaan inay ka boodaan biyaha, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad daboolto quraaradda.
Si iyaga si wanaagsan loo daryeelo, sii iyaga oksijiinta lagama maarmaanka ah caafimaadkaaga habboon. Tan awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in quraaradu leedahay, ugu yaraan, 40 litir kalluun kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Daryeelka kalluunka
Kalluunka waxaa khalkhaliyay sawaxanka
Kalluunka Razor, oo ka mid ah noocyada ugu layaabka badan
Goobaha xiisaha leh